U-Afarin Sajedi ligcisa elingena kwimizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sidinga iimvakalelo ezinamandla kolu luntu kunye nenkqubo ebaleka ngesantya esiphezulu kwaye apho ngamanye amaxesha esivusa khona kulolo hlobo lobuthongo olusigcina ngokungathandabuzekiyo, izinto ezinje ngesiqwenga sobugcisa esisothusayo samkelwa kakuhle.
U-Afarin Sajedi ngumzobi waseIran kunye nomzobi ofanelekileyo kuthi kolu phando lwefuthe kwii-neurons nakwiimvakalelo zethu. Umsebenzi wakhe kwimizobo uhamba ngokuthe ngqo ukuba nefuthe kwiimvakalelo ezithile ezinzulu abo bagqogqa iivesi ezithile uninzi lwabo olungafuniyo ukugqitha kuzo, kwaye ukuba bayadlula kuzo, bahlala bezama ukubeka uncumo kuyo ngokungathi yayingeyonto inabo.
USajedi uyazichukumisa, uzenze nzulu kwaye uzikrwele ngebrashi yakhe nangeepeyinti. Ibonakalisa ukubonakala okuthile kubo ukuze umsebenzi wabo ube yinto ecekisekayo ngamanye amaxesha okanye ukuba nabani na obeka amehlo abo okokuqala, bayame ngasemva ukuzama ukuqonda ukuba bayabona na.
Ubugcisa ekugqibeleni kunye nokuthetha ngayo yonke indlela. Njalo umntu unokukhetha ukungakhangeli, kodwa uya kujonga ngasemva ajonge oko kumoyisayo.
Andizukuthetha nto ngemifanekiso ethile leyo zinzima kancinci, kodwa sele ndikulumkisa ngokuthetha rhetoric ukuya kule migca, ke ukuba ufikile apha uyakukwazi ukuhlala okomzuzwana ujonge loo mehlo alusizi kunye nokuncwina apho kubonakala ukuba amathontsi sele eza kujonga lonto umjelo wokuwela ebusweni baloo ntombazana incinci inemfoloko efakwe ebunzini lakhe.
Imifanekiso leyo Bajonge ngqo phambili kwaye bajonge ingqondo yakho kunye nesiqu sakho. Bazama ukutsala umdla kwaye bajonge ukuba umfundi wakho ajike afumane ukufana.
Abafazi uhlobo lomphambukeli kwiintlungu ezininzi nokubandezeleka. Kwi facebook wakho y iphepha lewebhu Uya kuba nakho ukulandela umsebenzi wakhe onzulu.
Iimvakalelo ezingasonjululwanga ngakumbi? UFlora Borsi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iimvakalelo ezinzulu kwimizobo yegcisa laseIran Afarin Sajedi